Mourinho oo durba xaqiijiyay daafacyada uu kala hortagayo Everton
Friday, June 22nd, 2018 - 15:49:24
Wednesday September 13, 2017 - 14:22:03 in Wararka by Kubad Bile
Jose Mourinho ayaa sheegay Phil Jones iyo Eric Bailly in ay kooxda kusoo laaban doonaan kadib markii ganaax ee ku seegeen kulankii xalay 3:0dhagaha kaga gareen Basel tartanka Champions League.
Victor Lindelof iyo Chris Smalling ayaa waxa ay kusoo biirreen Jones iyo Bailly. kuwaas oo dhamaan afartii kulan ee United ciyaartay xili ciyaareydkaan kusoo wadda bilowday.Smalling iyo Victor ayaa waxay kashaqeeyeen kulankii afaraad ee xili ciyaareydkaan United in shabaqala laga taaban.
Mourinho ayaa sidoo kale waxaa uu kursiga keydka uu kaga tagay Valencia xili sidoo kale Darmian aanan loosoo xulan kulankii Basel. laakiin Mou ayaa xaqiiniyay Bailly iyo Jones kooxda ay kusoo laaban doonaa isla markaasina lasoo xulan doono.
"Smalling iyo Lindelof tababar adag aye u tahay.si wadda jir ayee u tababartaan kooxda maxaa yeelay waan ogaa si wadda jir ah inay u ciyaarayaan kulankaani"
"Haddii aa doonaysid inaa ku qayaaso waxa dhici kara maalmaha soo socda. waxaan wada ciyaaraaya Bailly iyo Jones. maxaa yeelay iyaga maanta maysan ciyaarin. sababtoo ah iyagu wey nasteen. maxaa yelay waxa ay lamacno tahay mar kale inay isla ciyaaraan. laakiin labbo maalmood kadib waxaa leenahay kulan League Cup ah. sidaasi daraadeed Victor iyo Smalling ayaa mar kale dheelaaya"